Shiinaha Usb-C hub-CH06A warshad iyo soosaarayaasha | Kooxda Brocade
▪ Brocade AI 6 1 1 USB Nooca C Hub waa xarun farsameysan oo ballaarinaysa isku xirka kumbuyuutarka xadidan.
▪ Waxay la imaaneysaa nooca isku dhafan ee nooca-C adabtarada badan oo shaqeynaya.
▪ 4K HDMI Soo Saarista Fiidiyowga: Taageer 4K @ 30Hz ama 1080P @ 60Hz soosaarka fiidiyowga. Muraayad ku dheji ama ku dheeree shaashadda buugga kombiyuutarka HDTV, kormeeraha ama mashruuc. Ku raaxayso filimada ama ciyaarta fiidiyowga ee kormeerahaaga. Ku muuji PPT-gaaga mashruucyada kulamada shabakadda.
▪ Gudbinta Xogta Xawaaraha-Xawaaraha Sare leh: 3 USB3.0 dekedo ah ayaa fiidiyoow, muusig iyo feylal lagu wareejiyaa ilaa 5Gbps, taas oo 10 jeer ka dheereysa USB 2.0. Marka waad ku dhammaystiri kartaa wareejinta faylka waqti aad u gaaban.
▪ 100W PD Charging Fast: 100W dekedda amarka korontada bixisa waxay kuu ogolaaneysaa inaad kombiyuutarkaaga ku buuxiso xawaare sare. Waad isticmaali kartaa Hub inta aad lacag bixinayso.
Xawaare Sare & Karti
Saddex xawaare oo USB 3.0 ah oo wareejinta xogta xawaareysa illaa 5Gbps. Kordhi shaashaddaada dekedda HDMI-ga HDTV, kormeere ama borojektar. Taageer wax soo saarka HDMI ilaa 4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) xalinta
Bixinta Awooda oo isku dhafan
Nooca-c dejinta dekedda waxay mari kartaa illaa awoodda 100w, waxayna siinaysaa awood dheeri ah diskiga adag, darawalka DVD-ga iyo qalabyada ku xiran dekedda USB
Naqshadaynta moodada Mac-qaabeedka
Hubku wuxuu la yimaadaa qalab tayo sare leh oo aluminium aluminium ah iyo Uni-body Case. Faraha ka-hortagga, faafitaanka kuleylka, miisaan fudud iyo qaab dhismeed kooban. Tusiyaha Isku-dhafan ee Isku-dhafan. Hubku wuxuu ballaariyaa isku xirnaanta aaladahaaga oo keydiya booska.
Waqtigan xaadirka ah, badeecadaha Brocade USB C ayaa loo dhoofiyay in ka badan lixdan dal iyo gobollo kala duwan, sida Koonfur-bari Aasiya, Ameerika, Afrika, Bariga Yurub, Ruushka, Kanada iwm Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan xiriir ballaaran la yeelano dhammaan macaamiisha mustaqbalka ee Shiinaha. iyo dunida inteeda kale.
Waxaan dammaanad ka qaadeynaa in Brocade uu isku dayi doono sida ugu fiican si aan u yareyno qiimaha iibka macaamiisha, u gaabiyo muddada iibsiga, tayada alaabada deggan, kordhinta qanacsanaanta macaamiisha iyo ku guuleysiga xaalad guul-guul ah.
Waxaan sugeynaa inaan kaa maqalno, haddii aad tahay macaamil soo noqonaya ama mid cusub. Waxaan rajeyneynaa inaad halkaan ka heli doonto waxaad raadineyso, hadii kale, fadlan si deg deg ah nala soo xiriir. Waxaan ku faaneynaa adeegga macaamiisha ugu sarreeya iyo jawaab celinta. Waad ku mahadsan tahay ganacsigaaga iyo taageeradaada!
Tayada badeecadayada USB C waxay la mid tahay tayada OEM, maxaa yeelay qeybahayaga asaasiga ah waxay la mid yihiin alaab-qeybiye OEM. Badeecadaha USB C waxay dhaafeen shahaado xirfadeed, mana soo saari karno oo keliya alaabooyinka heerka caadiga ah ee OEM laakiin waxaan sidoo kale aqbalnaa amarka Alaabooyinka loo habeeyay.
Iyada oo leh alaabada heerka koowaad ee USB C, adeeg aad u fiican, gaarsiin deg deg ah iyo qiimaha ugu fiican, waxaan ku guuleysanay inaan aad u amaanno macaamiisha ajnabiga ah '. Alaabadayada USB C waxaa loo dhoofiyay Afrika, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya iyo gobollo kale.
Hore: Long Range 2624ft. Nidaamka Gudbinta Fiidiyaha Fiilo La'aanta
Xiga: USB-C hub-CH06B
Waxyaabaha Daawaha Aluminium
Shaqaynta 3 * USB3.0 Ilaa 5Gbps
1 * Nooca C Ilaa 5Gbps
1 * HDMI Ilaa 4K UHD (3840 × 2160 @ 30Hz) / 1080p / 720p
1 * 3.5mm Maqal ku habboon in la isticmaalo
Feelo & ciyaar Uma baahnid Rakibaadda Darawalnimada
Bixinta Awooda 87W Max. 100W
Midab Cawl / Cagaar / Aqbal Customization
Cabbir 110 * 36 * 11 mm
Cabbir （xirmo） 161 * 90 * 22 mm
Miisaanka 63 g
Miisaanka （xirmada） 90 g
Damaanad 1 sano
Nidaamka Taageerada Window7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS x v10.6 iyo wixii ka sareeya OS
Muunad bixinta saamiga
Xarunta USB C
Long Range 2624ft. Gudbinta fiidiyowga aan fiilada lahayn ...
Zero Latency Iyo Kharash-ool ah 4K @ 60Hz HDMI E ...
Ultra Long-Range Wireless 4K HDMI Kordhinta Tran ...